The akasununguka paIndaneti basa. Kukarukureta nekongiri
Dzemaitirwe uwandu esimende, jecha uye mavhu yokuita kongiri
Huwandu kongiri E
masaga esimende pa 1 cubic mita M
Uremu musaga mumwe K
simende : jecha : yakapwanyika ibwe uremu
simende (por bhegi)
jecha (1 tani)
yakapwanyika ibwe (1 tani)
ruzivo pamusoro kukarukureta nezvinhu nokuda kongiri
Kutaridzwa runodiwa reshiyo.
E - The zvaida uwandu nekongiri. It unoratidzwa cubic metres.
M - Vangani masaga esimende inodiwa 1 cubic mita nekongiri.
K - Uremu musaga esimende. In makirogiramu.
Kutaridzwa kukosha zvinhu kwaunogara.
Musakanganwa kuti recalculate mutengo hombe zvinhu achirasikirwa kurema, kwete vhoriyamu.
Kukura uye kunwa esimende, jecha uye mavhu kuita kongiri imwe default kuutio vanopiwa nokuda reference, sezvo ndakarumbidzwa Vagadziri esimende.
Saizvozvowo, mutengo esimende, jecha, mavhu anogona siyana yekudyidzana munharaunda dzakasiyana.
The Kuronga rakapedzwa kongiri musanganiswa kunoenderana kukura (mapato) yakapwanyika ibwe kana mavhu, simende muchiso, ayo freshness. Zvinozivikanwa kuti mumakore mazhinji okuchengetera simende anorasikirwa zvivako zvayo uye simende unhu kuipa kurumidzei panguva yakakwirira mwando. Cherechedza kuti esimende anogona kuyera makirogiramu 50 vaisada makanyorwa. Trust, asi ongorora. zvikuru sei simende zvawakadururira yakanakisisa cheki.
Tapota ona kuti mutengo jecha uye mavhu raanotaura purogiramu 1 tani. Vendors Akazivisawo mutengo pa cubic mita jecha kana akapwanyika ibwe kana mavhu.
Chaicho kurema sejecha kunoenderana ayo mavambo Somuenzaniso, remurwizi kunorema kupfuura basa.
1 cubic mita jecha anoyera 1200-1700 makirogiramu Paavhareji - 1500 makirogiramu.
Mavhu uye yakapwanyika ibwe. Maererano mabhuku akasiyana-siyana 1 cubic mita uremu kubvira 1200 kusvika 2500 makirogiramu zvichienderana hacho (zera). Kwakanyanya - kupfuura yakaisvonaka.
Saka kuverenga mutengo paminiti savi jecha uye mavhu uchava yako. Kana kujekesa vanotengesa.
Zvisinei, kuverenga vachiri kunobatsira kuziva zvinofungidzirwa mari nokuda zvokuvakisa achigadzirira zvenyu vakada uwandu nekongiri.